FANAMBARAN’NY GOVERNEMANTA : “Tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika ny mpianatra”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny teo anivon’ny Governemanta manoloana ny zava-nitranga tao amin’ny Oniversiten’i Barikadimy- Toamasina izay namoizana aina mpianatra iray. 22 février 2021
Nisy fanambaràna nivoaka izay nosoniavin’ny mpitondra teniny dia ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo manoloana iny tranga iny. Voalaza tamin’izany fa melohin’ny Governemanta tanteraka ny fanimbana sy fangalarana tao amin’ny tranon’ny mpianatra sy ny fananan’ny Oniversite ary ny herisetra tamin’iny alakamisy iny. Maneho fiaraha-miory amin’ny fianakavian’ny namoy ny ainy ny Governemanta. Mirary fahasitranana ihany koa ho an’ireo naratra. “Aoka tsy hatao fitaovana politika intsony ny tanora mpianatra Malagasy”.
Io raha fehezina ny teboka goavana anisany nisongadina tao anatin’ity fanambaràna ity. Ny Governemanta izay nilaza fa tsy manaiky ny fampiasana an’ireo tanora ho fitaovam-panakorontanana ara-politika. Ho avin’ny Firenena ny tanora ka adidiny ny miaro sy mampiofana azy ireo fa tsy hatao fitaovana politika. Mahakasika ny fototry ny olana izay nahatonga ny korontana teo anivon’ny Oniversite dia efa mandray ny andraikiny amin’ny fanaovana fanadihadiana ny Fitondram-panjakana. Teo amin’ny fanomezana vatsim-pianarana sy ny fampitaovan’ny mpianatra dia voalaza fa efa nalefan’ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony tamin’ny filohan’ny Oniversite ny vola tamin’ny volana jolay 2020. Nilaza ny tsy handefitra ny Fitondram-panjakana raha misy ny trangana kolikoly tamin’ity raharaha ity.
“Efa misokatra ny fanadihadiana hijerena ny tena antony nahatonga ny fahataran’ny fizaràna izay tsy azo ekena. Ny Fanjakana Malagasy dia manantitrantitra fa tsy ekena ny kolikoly ary tsy hilefitra amin’izany mihitsy”, araka ny voasoratra tao anatin’ity fanambaràna ity. Efa miezaka mitady ny vahaolana ny Fanjakana Malagasy amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony mba hamahana ireo olana miverimberina eny anivon’ny Anjerimanontolo. Tafiditra ao anatin’izany ny fametrahana vahaolana maharitra momba ny fitantanana ny vatsim-pianarana sy ny karama eny anivon’ny Oniversite.
Tsy maintsy hirosoana ny fanadiovana, ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny lisitr’ireo mpianatra tokony hahazo ny vatsim-pianarana. Manoloana ny raharaha mafana misy eto amin’ny Firenena ankehitriny dia miantso ny rehetra ho amin’ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana hatrany ny Governemanta izay tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian.